Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena - Wikipedia
Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena
Ireo firenena mpisonia ny lalanan'ny Roma
Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena dia fitsarana maharitra hanandrana hitsara ireo voampanga ho famonoana ny mpiray tanindrazana, heloka bevava tamin'ny olombelona, ny heloka bevava amin’ny faha-olonana ary ny heloka bevava amin’ny ady.
Amin'ny faran'ny ny Zaikabe diplaomatikan’ny mpanam-pahefana fenon’ny Firenena Mikambana, Natao sonia tamin'ny 17 Jolay 1998 ny satan’i Roma izay nananganana ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena. Naorina tamin'ny fomba ofisialy ny 1 Jolay 2002 ny fitsarana, aty nidiran’ny Satan’i Roma an-kery. Any trano fitsarana dia afaka mitsara ireo heloka bevava manomboka tamin’io daty io. Ao La Haye ny toerana misy ny foibe ofisialin’ny Fitsarana, fa afaka mifidra ho aiza na aiza ny fitsarana.
Tamin’ny 1 Mey 2013, dia firenena 122 amin’ny firenena mpikambana 193 ny firenena mpikambana ao amin’ny Firenena Mikambana no nanao sonia ny satan’i Roma ary manaiky ny fahefan’ny FHBI. Firenena 23 miampy amin’izay izay ahitana an’i Rosia ary ny Etazonia no nanasonia ilay satan’i Roma fa tsy nankato izany. Ny sasany, anisan’izany ny an’i Sina sy India dia manatsikera ny mikasika ny fitsarana ka ty nanao sonia ny lalàna.
Ny FHBI dia afaka mampihatra ny fahefana rehefa manana ny zom-pirenen’ny firenena mpikambana iray ny olona hotsaraina. Mety ihany koa izany raha nitranga tao amin’ny tany anjakan’ny firenena mpikambana ny asa ratsy nataon’ilay olona, na koa raha rehefa ampitain’ny Filan-kevitry ny Filaminan’ny Firenena Mikambana. Ny fitsarana dia natao mba hifameno amin’ny rafi-pitsaran’ny firnena mpikambana: afaka mitsara izy iore rehefa tsy manana finiavana na fahafahana ny mitsara ny heloka ny fanjakana. Homena an’ny fanjakana ny dingana voalohany amin’ny fanadihadiana ary fitsarana ny heloka bevava.
Hatramin’izao, nanokatra fanadihadiana ain’ny toe-javatra fito ny Fitsarana, ao Afrika daholo izy ireo: Oganda, Repoblika Demokratikan’i Kongo, Repoblikan’i Santrafika, Darforo, Repoblikan’i Kenia, Libia ary ny Côte d’Ivoire. Olona 16 no ampangain’ny fitsarana.Olona roa no efa maty (na heverina ho toa izany), olona efatra no any an-tranomaizina, ary olona fito no mbola tsy voasambotra. Olona telo no nitoetra an-tsitrapo teo anoloan’ny fitsarana. Misy fanadihadian momba an’i Mali.
Ny voalohany notsarain’ny FHBI dia ny kongoley Thomas Lubanga noho ny heloka bevava amin’ny ady, izay nanoboka tamin’ny 26 Janoary 2009. Ny 14 Martsa 2012 dia hita fa meloka ny heloka bevava amin’ny ady i Thomas Lubanga. Izay no didim-pitsarana voalohan’ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitsarana_Heloka_Bevava_Iraisam-pirenena&oldid=694157"
Dernière modification le 25 Desambra 2014, à 01:36